မကောင်းသောမျက်လုံးကိုဖယ်ရှားရန်ဆုတောင်းသလား။ San Luis Beltránနှင့် San Benito
မကောင်းသောမျက်စိဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုတောင်း ဤဘေးဥပဒ်ကိုဖယ်ရှားရာ၌ထိရောက်သောအရာမှာ ၀ ိညာဉ်ရေးရာလိုလားသူဖြစ်သည်။
တစ်လျှောက်လုံး el Mundoမတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများတွင်မနာလိုမှု၊ မကောင်းသောအတွေးသို့မဟုတ်မနာလိုမှုမှမွေးဖွားလာသည့်ဆန္ဒသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်သည့်နာမကျန်းမှုများ၊ ဒဏ်ရာရမှုများနှင့်ဖျားနာမှုများဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သေခြင်း.
၎င်းသည်မကောင်းသောမျက်လုံးများနှင့်မကောင်းသောအလိုဆန္ဒများပါ ၀ င်သောမကောင်းသည့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုကူးစက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသောကြောင့်၎င်းကိုမကောင်းသောမျက်စိဟုလူသိများသည်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး ကိုညှိုးနွမ်းပျက်စီးစေသည့်အရေပြားတွင်မကြာခဏပေါ်ပေါက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ခြင်းသည်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်ဆိုးယုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည့်အရာမှာ၎င်းကို ၀ ိညာဉ်ရေးလက်နက်များဖြင့်အချိန်မီဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
1.2 မကောင်းသောမျက်စိဖယ်ရှားပစ်ရန်စိန့်လူးဝစ် Beltran ၏ဆုတောင်းချက်
1.3 မကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန် Saint Benedict သို့ဆုတောင်းပါ
အမှုတစ်ခုစီ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ၀ ါကျများစွာကို ၀ တ္ထုအဖြစ်အသုံးချရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်မကောင်းသောအမြစ်ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ထိုသူ၌နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုချန်ထားရန်ဖြစ်သော်လည်းအရာရာတိုင်းမှအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်။
လူတွေတကယ်ဖြစ်ရပ်တွေရှိတယ် ရောက်လာတော့မယ့်သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းရပြီ ဆုတောင်းပဌနာပြီးနောက်ဒီမကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့။
ငါသည်ခမည်းတော်၏နာမ၌ခမည်းတော်၏နာမတော်ကိုအမှီ ပြု၍ သင်တို့ကိုငါလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပြီ။ (အမည်ထပ်မံဖော်ပြခြင်း)၊
သံမဏိသို့မဟုတ်သံတူနှင့်မဖြတ်ပါ။ ၎င်းကို ဖြတ်၍ မရပါ။
မကောင်းသောမျက်စိကိုကုစားရန်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အချို့သူများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ ထိရောက်သည်ဟုဆိုသော်လည်းအချို့သည် ဒါဟာတစ်ခုချင်းစီကိုအမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်.
၎င်းသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရကြစို့။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းမပြုမီလိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိရန်လိုအပ်သည့်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
တန်ခိုးပါသောအံ့ဖွယ်အမှုများ၏ရင်းမြစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းသည်ဤကိစ္စတွင်လူအများအားချက်ချင်းပင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်လုံးဝကုသမှုကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုသူအားသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကိုစတင်တွေ့မြင်ရန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပေ။ ။
မကောင်းသောမျက်စိဖယ်ရှားပစ်ရန်စိန့်လူးဝစ် Beltran ၏ဆုတောင်းချက်
ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအဖ၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး၊ စစ်မှန်သောအနှစ်သာရနှင့်အပျိုစင်မာရိ၏နာမ၌သင့်ကိုဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစေပါသည်။ မူလအပြစ်.
သင်ချစ်မြတ်နိုး။ ပါရမီရှင်များဖြစ်သောဇနီး၊ အပျိုတစ်သောင်းလေးထောင်၊ Lord San José၊ San Roque နှင့် San Sebastiánတို့နှင့်သင်၏ Celestial တရားရုံး၏သန့်ရှင်းသူများနှင့်သူတော်စင်များအတွက်ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်ကလေးမွေးဖွားခြင်းမတိုင်မီနှင့်အပျိုစင်သတို့သမီး St. ။
သင်၏အမြင့်မြတ်ဆုံးလူ့ဇာတိခံယူခြင်း + မွေးဖွားခြင်း၊ အမြတ်နိုးဆုံးသောထမြောက်ခြင်း + ဘုန်းအသရေထမြောက်ခြင်း + တက်မြန်းခြင်းအဘို့အမြင့်မြတ်ဆုံးအသန့်ရှင်းဆုံးသောနက်နဲသောအရာအတွက်ငါ ယုံကြည်၍ သမ္မာတရားအားဖြင့်သင်တို့ကိုသင်၏မြင့်မြတ်သောဘုရင်မင်းမြတ်အားတောင်းပန်။ မင်းအားသင်၏မြတ်သောမိခင်ကိုလွတ်လပ်သောရှေ့နေ၊ ဒီရောဂါ၏ဆိုးရွားသတ္တဝါ, မျက်စိဆိုး, နာကျင်မှု, မတော်တဆမှုနှင့်အဖျားနှင့်အခြားမည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်နာမကျန်း။
ရန်ဆုတောင်း San Luis Beltran မကောင်းသောမျက်စိသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်!
San Luis Beltránသည်အနာရောဂါကုသခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်, ဝိညာဉ်ရေးရာဇာစ်မြစ်သောသူတို့၌တည်၏။
မကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန် Saint Benedict သို့ဆုတောင်းပါ
စိန့်ဘင်နီဒစ်အိုး။ ချစ်သူတို့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေသူ၊ စစ်တပ်များမတိုင်မှီမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသိပြီး၊ မိမိလူမျိုးကိုမျက်နှာသာပေးပြီးငါတို့သခင်ကိုအကြွင်းမဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့မြင့်မြတ်သောလမ်းဆုံအားဖြင့်ငါ့လိုအပ်ချက်ကိုကုစားပေးပါ၊ ငါ့ဘဝနှင့်ဆွေမျိုးများ၏ဆိုးကျိုးများကိုအမြန်ဆုံးကာကွယ်ရန်၊ မင်း၌ရှိသောတန်ခိုး၊ ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါစေ။ အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုညှဉ်းဆဲ။ ၊
ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။ မကောင်းသောအရာ၊ မကောင်းသောအမှုများမှလည်းကောင်း၊ နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်နှင့်မကောင်းသောအမှုများမှလည်းကောင်းကာကွယ်ရန်တောင်းပန်ပါ၏။ ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့။ ရန်သူအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြပါစေသော။
နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ သင့်အတွက်ကျေးဇူးတော်တစ်ထောင်သာရှိပါစေသော။ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ငြိမ်သက်အေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းမရှိခြင်း၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု၊ ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ အတွင်း၌ရှိနေကြသော်လည်းသူတို့ဖြတ်သန်းသွားသော်လည်းသန့်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းရန်ကျွန်ုပ်ခွန်အားရှိပါသည်။
စိန့်ဘင်နီဒစ်သည်ဘုရားသခင်သဘောတူသောကျွန်အဖြစ်လူသိများသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောကိစ္စများတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသူဖြစ်သည် ငါတို့အသက်ကိုမကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းငှါစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်, နေအိမ်, အလုပ်, အိမ် y familia.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အသုံးပြုခြင်းကိုအလေးထားသည် စိန့်ဘင်နီဒစ်တံဆိပ် နေရာတိုင်း၌ရှိသော ml နှင့်ငါတို့ကိုဝေးဝေးသို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်ရန်။
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာတိုင်းတွင်မကောင်းသောစွမ်းအင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကာကွယ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ စိန့်ဘင်နီဒစ်ကိုနေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်၎င်းမကောင်းသောစွမ်းအင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိနိုင်သောဘေးဥပဒ်များမှကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်။
သစ္စာရှိကိုးကွယ်သူများ၏အလိုတော်ကိုစောင့်ကြပ်။ ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ကျိန်းဝပ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသန့်ရှင်းသောဘုရား၏နာမတော်အားဖြင့်၎င်း၊
အိုအဘ၊ ဒီလူလေးကိုကူညီနိုင်အောင်ဒီနေ့ဒီနေ့မင်းရဲ့နာမကိုအမှီ ပြု၍ ငါအော်ဟစ်သည်။
သင်၏အသန့်ရှင်းဆုံးနှင့်ကရုဏာပါသောအလိုတော်၊ အရာခပ်သိမ်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးသခင်ယေရှုကသင်၏ကျန်းမာရေး၊ စိတ် ၀ င်စားမှုအခြေအနေ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ဘုန်းအသရေကိုပြန်လည်ကျန်းမာစေမည်ဟုကျွန်ုပ်သိပါသည်။
ကလေးများသည်မကောင်းသောမျက်လုံးများခံစားနေရသောအန္တရာယ်အရှိဆုံးသောလူ ဦး ရေများပြားပုံရသည်၊ ကလေးသူငယ်များသည်လူအချို့၏မကောင်းမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောနှလုံးသားထဲတွင်အခြားမလိုအပ်သောအရာများပိုင်ဆိုင်လိုသောကြောင့်နိုးလာခြင်းကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
အများဆုံးအကြံပြုသည် ကလေးများကိုကာကွယ်ရန်နံနက်တိုင်းဆုတောင်းပါ တစ်နေ့တာအတွင်းသူတို့ကိုထိုနည်းအတိုင်းထားပါ၊ ၎င်းသည်မိသားစုအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၀ ါကျ ​​၅ ပုဒ်ကိုပြwithoutနာမရှိဘဲပြောနိုင်ပါတယ်။